आदिकवि- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २०, २०७७ विमल निभा
कुनै आदिवासीले नै
त्यस समयदेखि यसलाई
कसले फनफनी घुमाइरहेको छ ?
त्यो साहसिक पाइलालाई
मेरो हार्दिक स्वागत
त्यो मधुरतम प्रेमलाई
मेरो सहस्र चुम्बन
त्यो दृढ शपथलाई
मेरो पूर्ण समर्थन
त्यो मृदु सपनालाई
मेरो अगाध स्नेह
त्यो अदम्य लडाइँलाई
मेरो तात्तातो सलाम
त्यो सुरम्य गीतलाई
मेरो असंख्य बधाई
हाम्रो घर, आँगन
र, हामीसमक्ष नै
देहको मांस, हाड
र, त्यसभित्रको मज्जा
(रक्त पनि मिसाएर)
हो, त्यही उच्च ललाट
र कर्मठ भुजायुक्त
आद्य प्रतिमान अर्थात्
अर्थात् अर्थात् अर्थात्
यो धूलो माटोसँग
विलुप्त किन्तु अविच्छिन्न
एक असमकालीन कविको
भावपूर्ण शब्द समर्पण
-कवि निभाका ‘आगोने रउभिएको मानिस’, ‘एउटा बाहुला नभएको बुसर्ट’, ‘जोकरको बन्दुक’ कविता कृति प्रकाशित छन्। ‘ डिकेन्द्र राजवंशीको आत्महत्या’ निभाको प्रकाशोन्मुख कवितासंग्रह हो।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ १३:१०
पीसीआर परीक्षण गराउन रक्षामन्त्रीको सोर्स !
कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको व्यथा : पिसाब फेर्न चर्पी जान दिइएन, बाहिरै प्लास्टिकमा पिसाब फेरेँ
भाद्र २०, २०७७ दुर्गालाल केसी
दाङ — घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का दुर्गालाल जैसीलाई भदौ २ गते बेस्सरी ज्वरो आयो । स्वास्थ्यकर्मी भएकाले आफैं ज्वरो जाँचे । १ सय ४ डिग्री ज्वरो थियो । उनले सिटामोल खाए, ज्वरो कत्ति पनि कम भएन । ज्वरो नघटेपछि भदौ ३ गते घोराहीस्थित दीप ज्योति अस्पताल पुगे ।
बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत दुर्गालाल जैसी
फिजिसियन डा. मीनचन्द अधिकारीले जाँचे, डाक्टरले हिस्ट्री बुझे । जैसी साउन १९ गते गाडी दुर्घटनामा परेका आफन्तको उपचारका लागि भैरहवा गएका थिए । भैरहवाबाट फर्केपछि ज्वरो आएको भनेपछि डाक्टरले पीसीआर परीक्षण गर्न सुझाव दिए ।
जैसीले घोराही–१५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेलाई पीसीआर परीक्षण गराउने पहल गरिदिन अनुरोध गरे । उनले घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीलाई जानकारी गराए । पीसीआर परीक्षणको क्रममा छ भन्दै जैसीले तीन दिन कुरे । तीन दिनपछि जैसीले घर्तीलाई आफै फोन गरे । घर्तीले स्थानीय तहले ट्रेसिङको मात्रै काम गर्ने भएकाले आफैं घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर परीक्षण गर्न सुझाए । यतिबेलासम्म जैसीलाई स्वास फेर्न कठिन भइसकेको थियो । आफैं घरमै बाफ लिएर बसिरहेका थिए ।
उनी भदौ ७ मा प्रतिष्ठानमा पुगेर परीक्षण गराए । उनलाई डेंगु परीक्षण गर्न भनियो । डेंगु परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि केही भाको छैन भनेर घर पठाइयो । उनले पीसीआर परीक्षण गर्न भने पनि हुँदैन भनेर पठाइयो । जैसीको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो । ज्वरो कत्ति पनि घटेको थिएन । श्वास फेर्न, हिँड्न कठिन हुन थाल्यो । उनलाई कोरोनाको शंका झन् बढ्न थाल्यो । भोलिपल्ट फेरि प्रतिष्ठानमा पुगेर जसरी पनि पीसीआर परीक्षण गरिदिन अनुरोध गरे । त्यतिबेलासम्म उनको अवस्था साह्रै बिग्रिसकेको थियो । प्रतिष्ठानले त्यत्तिकै पीसीआर परीक्षण गर्न मानेन ।
अन्तमा उनले आफ्ना साथी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलका प्रेस सहयोगी लोकेन्द्र केसीलाई समस्या सुनाए । पीसीआर परीक्षणका लागि भनिदिन अनुरोध गरे । उनले प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसमक्ष कुरा पुर्‍याए । त्यसपछि मात्रै उनको स्वाब लिइयो । उनले स्वाब लिनसमेत माथिबाट भनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै दुखेसो पोखे । ‘१२ घण्टापछि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउने र पोजिटिभ भएमा मात्रै फोन गर्ने भनेर जानकारी दिए,’ जैसीले भने, ‘त्यसपछि म घर गएँ । एक दिन बित्दा पनि फोन आएन । मेरो ज्वरो घटेको थिएन । श्वासप्रश्वासमा झनै समस्या भइरहेको थियो । त्यसपछि अर्को दिन बिहानै ८ बजे श्रीमतीका साथमा प्रतिष्ठान पुगें ।’
उनले आफ्नो रिपोर्टबारे बुझे । ‘अझै रिपोर्ट नआएको भनेर आलटाल गरियो । कुरेर बस्न भनियो । म बाहिर फिभर क्लिनिकमा दिनभर बसें,’ उनले भने, ‘अपराह्न ३ बजे मात्रै रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी दिइयो । त्यसपछि मलाई हेर्न कोही पनि नजिक आएन ।’ उनले दिनभर केही खान पाएका थिएनन् । उनलाई तिर्खा लागेको थियो । श्रीमतीलाई पानी किन्न पठाए तर प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पानी किन्न जान पनि दिएनन् । किनेर पनि ल्याइदिएनन् । ‘पिसाब फेर्न चर्पीतर्फ जान खोजेँ, त्यहाँ पनि जान दिएनन् । दिसा लागेको छभन्दा पनि मतलब गरेनन् । अन्तिममा एउटा प्लास्टिक दिए,’ उनले भने, ‘मैले बाहिरै अस्पतालको भित्तामा अडेस लागेर प्लास्टिकमा पिसाब फेरें । अब म मर्छु नै भन्ने लागिरहेको थियो ।’
उनलाई आइसोलेसन पठाउने तयारी पनि भएन । ‘श्वास फेर्न धेरै गाह्रो भएपछि अक्सिजन जोडिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ, सलाइन चढाउन अनुरोध गरे तर केही पनि सुनुवाइ भएन । उनले भने, ‘बेलुकापख मात्रै कता जानुहुन्छ भनेर सोधे । मैले प्रतिष्ठानमा आईसीयू सेवा उद्घाटन भएको सुनेकाले यहाँ राम्रै होला । यहीँ उपचार गर्नुहोस् भनें । तर, यहाँ हुँदैन भनेर मानेनन् ।’ अन्तमा फेरि वडाध्यक्षलाई अनुरोध गरेर उनी राति मात्रै बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा गए ।
अस्पतालमा पुगेपछि डाक्टरहरुले राम्रोसँग उपचार गरे । निमोनियाको औषधि गरे । त्यसपछि उनलाई बिस्तारै केही सहज हुन थाल्यो । अहिले उनलाई बाँच्ने आशा पलाएको छ । अहिले उनी कोरोना अस्पतालकै आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । ‘म भाग्यले बाँचें । म स्वास्थ्यकर्मी हुँ, मैले लक्षण देखिइसक्दा पनि समयमा पीसीआर परीक्षण गर्न पाइनँ । यति लामो समय म कुरेर बसें,’ जैसीले भने, ‘अन्तमा रक्षामन्त्रीको सोर्स लगाउनुपर्‍यो । यस्तो अवस्थामा कसरी मान्छे बाँच्छ ? सर्वसाधारणले कसरी उपचार पाउँछ ? पीसीआर परीक्षण कसरी हुन्छ ?’
प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सागर पन्थीले भने लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण सहजै गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । ज्वरो आएको, स्वास फेर्न गाह्रो भएको बिरामी आएमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गर्छौं । कोरोनाको शंका भए तत्काल स्वाब परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘पीसीआर परीक्षण गराउन कठिनाइ छैन । हामीले बिरामीलाई दु:ख दिने काम पनि गरेका छैनौं ।’
प्रतिष्ठानमा हालसम्म १९ हजार १ सय ९२ स्वाब संकलन भएकामा १९ हजार १ सय २० को परीक्षण भइसकेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा हालसम्म ७ सय ९५ जना कोरोना संक्रमित रहेको र तीमध्ये ८९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ १३:००
२० युवाको कथा ‘छकालै’